BUDDHIST TERMS' Dictionary: CHARITY - ဒါန
CHARITY - ဒါန
ဒါန - စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း။
စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းသည် ဒါနမည်၏၊ ကံ, ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ပြီး မလှူမီ, လှူပြီး အချိန်သုံးမျိုးလုံး၌ ထက်သန် ၀မ်းမြောက်မှုရှိသော အလှူသည် အကျိုးကြီးသော အလှူဒါန မည်၏။
ပေးကမ်းခြင်းသည် သူချစ်ဆေးဖြစ်၍ ကောင်းကျိုးမှန်သမျှကို ပြီးစေနိုင်၏။
Giving away asagift or donation is dᾱna. If one gives withafirm belief in kamma and its results, and if one does so with keenness andafeeling of joy at the time of giving and also before and after, that gift is indeedagreat gift. Charity is likealove philter and brings all kinds of benefit.